महिला शरीर संरचना पुरुष बाट एकदम फरक छ। महिला तिनीहरूले छोराछोरी जन्माउन जन्म दिन र तिनीहरूलाई खुवाउन, menstrual चक्र छ। आँखा को शरीर रचनाको विज्ञान मा स्पष्ट मतभेद साथै फरक पनि शरीर बोसो र शरीर भर र पनि दुई sexes को प्रतिनिधिहरु विभिन्न तरिकामा उत्पन्न कि उमेर-सम्बन्धित परिवर्तनहरू यसको वितरण विभिन्न घनत्व प्रतिबिम्बित गरिएको छ। र महिला तीव्र दुखाइ छन्, यो कारण सबैभन्दा अप्रत्याशित हुन सक्छ। तिनीहरूलाई केही विचार गर्नुहोस्।
को कारण कम फिर्ता दुखाइ महिलाहरु मा
पहिलो र मुख्य के बालिका देखि केटाहरू distinguishes - महिनावारी उपस्थिति छ। महिनाको समयमा गुरुत्वाकर्षण को केन्द्र तरल पदार्थ जम्मा को प्रभाव अन्तर्गत विस्थापित भएको छ। यो संग जडान फिर्ता तल्लो मा भारी वृद्धि। चक्र, सँगसँगै कि कम हर्मोन वृद्धि , दुखाइ सीमा यसरी गंभीर फिर्ता दुखाइ, जो को कारण विशुद्ध शारीरिक र नियन्त्रण गर्न कठिन छन्।
अर्को कुरा पछाडि दुखाइ को उद्भव, गर्न अपरिहार्य छ भनेर - गर्भावस्था। यो अवधिमा लगभग सबै corporeal मेकानिक्स भिन्न समयमा लोड बोक्नु शरीर क्षमता घट्छ। श्रम सजिलो प्रवाह लागि tendons र जोइन्टहरूमा आराम, relaxin हर्मोन बिना, सामान्य भन्दा ठूलो संख्या मा उत्पादन गरिएको छ। किनभने यी सबै प्रक्रियाहरु को, को मेरुदण्ड मा लोड बढ्छ। मा कम फिर्ता दुखाइ को कारण महिलाहरु प्रस्ट हुन्छन्। यो कि गर्भावस्था को समयमा सामान्य वजन 12.5 भन्दा बढी किलोग्राम वृद्धि छैन महत्त्वपूर्ण छ।
धेरै शारीरिक महिला मा कम फिर्ता दुखाइ को कारण, यस्तो makromastiya। ठूलो बस्ट - यो आनन्द र खुशी, यो अक्सर मानिसहरू जस्तो देखिन्छ रूपमा छ। यो गुरुत्वाकर्षण को केन्द्र बदलता, यो काँध र घाँटी, टाउको दुखाइ मा दुखाइ - यो rises र अगाडी उत्प्रेरित गर्छ। यसरी, संतुलन महिला कायम गर्न रूपमा, तल्लो फिर्ता मांसपेशिहरु मा लोड वृद्धि फिर्ता दुबला छ। यो समस्या चिकित्सक द्वारा surgically मनमोहक हल थियो।
फिर्ता दुखाइ कारण रोग फैलाउने गर्न उत्पन्न गर्न सक्छ - osteoporosis। यो त महिला पुरुष भन्दा धेरै यो उजागर गर्दै छन् कि हुन्छ। Osteoporosis रोकियो वा यसको विकास धीमा गर्न सकिन्छ। यो एक चिकित्सक, विशेष तयारी द्वारा शारीरिक शिक्षा, पर्यवेक्षण गर्न योगदान गर्नेछ। त्यसैले यसलाई जब लक्षण परिवर्तन गायब गर्न बलियो देखिन सक्छ वा यो रोग, हर्मोन सिधै निर्भर छ। उत्तरार्द्ध प्राय।
महिला मा कम फिर्ता दुखाइ को गैर-शारीरिक कारण
महिला उच्च एडी लगाउने - यो सुन्दर र सेक्सी मानिन्छ। सायद त्यसैले, तर नकारात्मक प्रभाव, धेरै पटक बलियो शरीर मा exerted। उच्च एडी को श्रोणि फिर्ता हुर्काउन र खुट्टा मा लोड वृद्धि र, फलस्वरूप, तल्लो मा, शरीर को प्राकृतिक वक्र बदल। यस्तो जुत्ता दुरुपयोग छैन।
फिर्ता दुखाइ धेरै भारी बैग लगाउने कारण उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनुभव महिला जो त्यो औसत मा, हरेक दिन उसलाई वहन "झोला", बारे 5-6 किलो वजन भनेर देखाउँछ। यसलाई आफ्नो सामग्रीहरू समीक्षा गर्नुपर्छ र मात्र एक मानिस संग किनमेल जानुहोस्।
अर्को कारण, मात्र खुसी भनिन्छ हुन सक्छ जो - बच्चाहरु। एक आमा हुनुको - यो काम, कहिले काँही धेरै गाह्रो छ। शब्द को truest अर्थमा: बच्चाहरु गर्दा पहिलो कदम बोक्न छ। Fallen खिलौने लागि, जूता, buttoned ज्याकेट बाँध - साथै, यो मोड गर्न अक्सर आवश्यक छ। हरेक बच्चा स्वस्थ आमा आवश्यक र हेरविचार कि सम्झना!
को छाती अन्तर्गत Chafing: लोक उपचार को उपचार, फोटो
Rheumatism। लक्षण र उपचार
बवासीर र अन्य ककडी लोक उपचार को प्रभावकारी उपचार
फेफडों मा तरल पदार्थ। यो के हो र कारण के हो
यो मरम्मत मा टाइल मा टाइलहरू राख्न सम्भव छ?
"Fiat Croma": पहिलो र दोस्रो पीढीको विशिष्टताहरू
यस श्रृंखला को सारांश "Tatianina रात"
मास्टर वर्ग, खिलौने, तकियों, आफ्नो हात को ढाँचाहरू प्रयोग गरेर कसरी सी गर्न
अस्पताल "वसन्त", Truskavets: वर्णन, विशेषताहरू, सेवा र समीक्षा
कसरी ठोस तल्ला मा laminate बिछाउने छ
दुर्व्यवहार gidatide - यो के हो? कारणहरू, लक्षणहरू र उपचारका तरिकाहरू
सोधपुछ लागि रबर ट्रयाक: प्रकार, स्थापना